Izindaba - Isibonelo sohlelo lokusebenza lwe-SWMC drilling rig kubunjiniyela be-photovoltaic
Isibonelo sohlelo lokusebenza lwe-SWMC Drilling rig kubunjiniyela be-photovoltaic
Ngokushoda kwamandla kagesi okwandayo, ukuthuthukiswa nokusetshenziswa kwamandla amasha kuhehe ukunaka kwawo wonke amazwe emhlabeni.Ngaso leso sikhathi, amandla amasha e-photovoltaic aseChina athuthuka ngokushesha, futhi ubuchwepheshe buya bukhula kancane kancane, buya noma bufinyelela Izinga eliphakeme emhlabeni. Ngakho-ke, izwe libeka phambili umkhombandlela wentuthuko, izinhloso zamasu, imisebenzi esemqoka kanye nezinyathelo zenqubomgomo ye-photovoltaic.
Iphrojekthi yokukhiqiza amandla kagesi, enamandla afakiwe we-40MWP (MW), isedolobheni laseWulanchabu, esifundeni esizimele sase-Inner Mongolia, esinamamitha ayi-1500-1520, angaphansi kwesimo sezulu sezwekazi kanye nesimo sezulu esomile indawo ethokomele.Ithintwe ingcindezi yaseMongolia Plateau, izinga lokushisa eliphakeme lingama-degree angama-36.5, izinga lokushisa elincane lingaphansi kwama-degree angama-39, ubukhulu obukhulu benhlabathi efriziwe ngu-220cm, ubukhulu beqhwa obungu-19cm, futhi isilinganiso sonyaka imvula ingu-315.3mm.
Isikhungo sokuklama sagcina sinqume uhlelo lokumba imfumba ye-photovoltaic ngale ndlela elandelayo: ukuvula u-150mm, ukujula kwemigodi engu-1.0-1.5m.
I-SWMC inikeze amayunithi we-8 amayunithi we-SWMC 370 afanelekela ukwakhiwa kwe-photovoltaic, imishini engu-5 ye-SWMC 360 imishini yokumba enekhono eliqinile lokukhuphuka, amayunithi ama-3 e-SWMC D50 imishini yokubhola efanelekile ukunyakaza komhlaba okuthe xaxa endaweni yesithombe se-photovoltaic, ingqikithi yamasethi ayi-7 SULLAIR American 600RH kanye no-550RH ama-air compressors, amasethi ama-4 we-Fusheng Elman 630 compressors, nama-5 amasethi we-Liuzhou Fuda 180-19 air compressors.
I-SWMC 370, i-SWMC 360 ne-SWMC D50 isebenzisa ukukhasa ukuhamba, okunokuguquguquka okuhle kwendawo, ukuqina okuhle nokusebenza ngokuphepha okuphezulu.I-torque yokukhipha amandla yomshini ojikelezayo inkulu, engaqedwa ngasikhathi sinye ngaphansi kwezimo ze-geological ezifana amatshe ayigobolondo nezinsalela zomoya, ngaphandle kwesidingo sokubhola kwesibili.
I-Sullar air compressor, i-Fushenger air compressor, i-Liuzhou Fidelity air compressor, lapho kubhola ukuvula okukhulu ukugcina ukuzinza kwengcindezi, ukugcina ijubane lenqubo yonke.
Ikhono lokukhuphuka ngama-degree angama-40 le-Drilling Rigs le-SWMC 370 kanye ne-SWMC 360 liqinisekisa ukuqhubeka kwephrojekthi.SWMC imishini yokubhola ifakwe i-winch kagesi ukubhoboza imbobo yenqwaba ngomthambeka ophakeme, oqede umsebenzi wayo onzima wokubhoboza. ukuma ohlangothini, ukubeka okusheshayo nokunembile ukubeka nokubhola, ukugwema ukuchitha isikhathi.
I-Drilling Rigs i-SWMC 370, i-SWMC 360 ne-SWMC D50 ifakwe izinto zokufaka ngaphansi kwamanzi lapho kubhola izingqimba zamatshe.Lapho kubhola inhlabathi bese kufakwa okufakwa ngamapayipi we-auger.
Ngama-RIGS angu-16 kuphrojekthi, umsebenzi wokubhola we-4 1MW square arrays (esewonke amaqembu angama-800 anezimbobo ezingama-6,400) uqediwe ngenyanga eyodwa, okuqinisekise ikhwalithi kanye nesheduli yephrojekthi, futhi azikho izingozi zokuphepha ezenzeke ngesikhathi sokwakhiwa. ngasikhathi sinye, kuhlanganiswe nezici zephrojekthi yesayithi, ngokuya ngezimo zendawo zokuthatha izinyathelo ezahlukahlukene zokwakha, inqubo yokwakhiwa kwemigodi ibushelelezi, ikhwalithi enhle, ngemuva kokuhlolwa komuntu wesithathu, zonke izinkomba zokuhlola zihlangabezana nezidingo ezisemthethweni nezokuklama, futhi bathole ulwazi olungcono lokubhola, kanye nenzuzo yesicelo sephrojekthi yokwakha esizayo.